चेक बुट्टा भएको अम्लेट बनाएर आफ्नो नानीलाई छक्क पार्ने हैन त? हेर्नुहोस भिडियो सहित। - ज्ञानविज्ञान
सानैदेखि चित्र कोर्न अनि रङ्ग लगाउने रहरलाई मैले आफ्नो खानाको परिकारमा उतार्न पाउँदा धेरैनै सन्तुष्टीको अनुभव भयो। यो अमलेट हेदा जति आनन्दको छ, बनाउन त्यत्तिकै सजिलो र खाँदा उत्तिनै मिठो पनि छ। चक्लेटी फूलबुट्टा भएको प्यानकेक बनाए पछि मलाई अरुपनि यस्तै बुट्टेदार परिकारहरु बनाउने हौषला बढ्यो ।
यूट्यूबमा चेक बुट्टा भएका धेरै परिकारहरु भेटिन्छन्, जस्तै: चेक कुकिज, चेक केक आदी तर चेक अम्लेट भने यो नै सायद पहिलो हो। यहाँ मैले चेसको जस्तो चेक ब्ट्टा कोर्न केच्चप, तेल, कोर्नस्टार्च, खानामा हालिने रातो रङ र मैदाको प्रयोग गरेको छु। यी सामाग्रीहरुबाट बनाइएको लेदोको ठिक मात्रा तयार पार्न मलाई धेरै पटक प्रयास गर्नु पर्यो । तपाईहरुलाई लाग्ला किन यति धेरै कुराहरुको प्रयोग गरिएको होला, केलव केच्चपमात्रको बनाउँदा हुँदैन भनेर तर यी सबै कुराहरुको आ-आफ्नै महत्व रहेका छन् । केच्चप चाहीं मैले खासगरी स्वाद र रङको लागी प्रयोग गरें। तेल र कोर्नस्टार्चले तयार पारिएको लेदो कोनको प्वालबाट एकनासले निस्किन मद्धत गर्छ भने मैदाले ब्ट्टालाई अमलेटमा टाँसिन सहयोग गर्छ ।
यो अमलेट बिशेषगरी बच्चाहरुसँग मिलेर बनाउँदा अझै रोमाञ्चकता थपिन्छ । आफ्ना नानीहरुलाई छक्क पार्न होस् या बिशेष पाहुनाका लागि होस्, यो परिकार उपयुक्त हुन्छ। कसरी यो परिकार बनाउने भनेर सोचिरहनु भएको भए तल मैरो यूट्यूब च्यानलको भिडियो राखेको छु। हेरेर बनाउन प्रयास गर्नु होला र आफ्ना अमुल्य सल्लाह तथा सुझावहरु दिनु होला। यसले मलाई अझै हौषला दिनेछ । प्रत्यक हप्ता नयाँ परिकारको लागी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।
Topics #जुनालीज् कुक बुक
Don't Miss it यदि तपाइ कसैलाइ माया गर्नु हुन्छ ? याद गर्नु होस यी कुराहरु ..
Up Next जो व्यक्ति बिहान चाँडै उठ्छन र राती चाँडै सुत्छन्, उनीहरु स्वस्थ र बुद्धिमान हुन्छन्